Ajọ Ifufe Irma: Akụkọ banyere oghere mgbazinye Villa na St. Barths, Anguilla, St.Martin, USVI, BVI
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ajọ Ifufe Irma: Akụkọ banyere oghere mgbazinye Villa na St. Barths, Anguilla, St.Martin, USVI, BVI
Akụkọ Antigua & Barbuda • Na-agbasa News Travel • British Virgin Islands (BVI) na -agbasa akụkọ • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Resorts • Safety • Akụkọ Sint Maarten na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ Virgin Islands nke US
Oké ifufe Hurricane Irma ka nọ na ọnọdụ mgbake na Caribbean. Maka oge ahụ bidoro Nov 1, 2018, Onye ọrụ Villa WIMCO nyere akụkọ banyere agwaetiti ndị Irma metụtara:
A ga-emeghe 96% nke Pọtụfoliyo ụlọ nke WIMCO nke obodo 355
84% nke ụlọ nkwari akụ anyị na-anọchi anya ga-emeghe
N'ime ụlọ oriri na ọ 70ụ XNUMXụ XNUMX ga-emeghe
Akụkọ nyocha WIMCO na-aga site na St Barths
Nkwupụta sitere na ndị otu anyị na-ejegharị ejegharị:
"...Banyere agwaetiti ahụ n'onwe ya - n'okwu –na-atụ n'anya! Obodo ndị anyị letara dị mma nke ukwuu, ịntanetị n'ime obodo ndị ahụ na-arụ ọrụ n'enweghị ntụpọ, igwe onyonyo satịlaịtị na-enye akụkọ ụtụtụ kwa ụbọchị, ọdọ mmiri juputara, ọ dị ka a ga - asị na ọ nweghị ihe mere. Window windo nke ụlọ ahịa nwere ihe ngosi mara mma, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ebe a na-eri nri, n'ọtụtụ akụkụ, ụlọ ahịa na-ere nri juru eju. ”
85% nke obodo iri isii anyị na-anọchi anya ga-emeghe
%Lọ nkwari akụ niile anyị na-anọchite anya ha ga-emeghe
Restaurantslọ nri dị elu ndị ezumike na-agakarị na Shoal Bay na Sandy Ground niile ga-emeghe
Akụkọ nyocha WIMCO na-aga site na Anguilla:
"Anguilla agbakeela kpamkpam, akụrụngwa na ọrụ niile emezigharịla ma anyị na-anabata ndị ọbịa obodo ruo ọtụtụ ọnwa, ọtụtụ n'ime ụlọ oriri na ọ 100ụ XNUMXụ XNUMX na-emeghe ugbu a. E nwere ụlọ ole na ole na-efu na ochie Cases (ụlọ ndị Caribbean n'oge ochie) na ụfọdụ ebe nwere osisi wedara ala ma obu osisi. N'agbanyeghị nke a, Anguilla yiri ka ọ dị ọcha karịa anyị karịa ka ọ dị n'oge gara aga. Na mkpokọta, agwaetiti ahụ dị oke mma, ndị otu agwaetiti anyị na-elekwa ndị ọbịa anya nke ọma. Anyị echeghị na ndị ọbịa ọ bụla ga-emechu ihu.
45% nke obodo iri isii anyị na-anọchi anya ga-emeghe
WIMCO ebe akụkọ si St Martin. Nkwupụta sitere na ndị otu anyị na-ejegharị ejegharị:
“Mba enweghị mkpọmkpọ ebe n'okporo ụzọ ka ị na-akwọ ụgbọala site na French St Martin, agbanyeghị enwere ihe akaebe nke ọtụtụ ụlọ ndị ka na-arụzi ma mebie, ndị a ga-ewe oge iji laghachi na nkịtị. Ihe karịrị ụlọ iri abụọ anyị nyochara niile dị mma, ma dị njikere ịnabata ndị ahịa. Site na nri iri enwere ezi nhọrọ. Anyị gbalịrị ịga Meza Luna ma edere ya nke ọma bụ ezigbo akara, Mario's na Cupecoy nabatara anyị ma nri abalị dị ezigbo ụtọ. Nnukwu ihe nchọta ọzọ bụ Alinas dị na Simpson Bay, sushi mara mma ma na-atọkwa ụtọ nke ukwuu, yabụ anyị gbalịrị ya ugboro abụọ! Ihe ọzọ dị mma bụ azụmaahịa ọhụrụ mepere mgbe Irma gasịrị. na Pelikaan Brewery na Cole Bay St Martin malitere ịwụnye suds na nwere ụfọdụ magburu onwe biya na-sample. Ogwe Bistro Lagoonies bụ ihe ọzọ pụtara ìhè. N’usoro ụlọ oriri na ọ restaurantụ ofụ nke Grand Case, naanị ụlọ nri 20 mepere emepe, ma nnukwu ọrụ nọgidere na-eweghachi mpaghara a ka ọ dịbu. Na mpaghara Simpson Bay Marina na Ọdụ ụgbọ mmiri, mmadụ ka nwere ike ịhụ ụgbọ mmiri ndị dara ma mebie, ụgbọ mmiri na-ese n'elu mmiri. Site na mkparịta ụka ha na ndị bi na ya, ha ga-asị, “Ha, ị kwesịrị ịhụla mpaghara a ọnwa abụọ gara aga!” Ya mere, a na-emeziwanye kwa ụbọchị. N'agbanyeghị ọnọdụ agwaetiti ahụ, ebe ọtụtụ azụmaahịa na ebe obibi ka na-arịgo ma ọ bụ na-arụzi, ndụ na-aga n'ihu. Ndị mmadụ nọ na-ekpori ndụ. N'ozuzu ya, ọ dị mma ịhụ nkwụsi ike nke ndị obodo, ndị obodo mara mma, na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ anyị gara dị egwu. Ọ bụrụhaala na ndị ahịa mara ihe ha na-abanye ma chọọ ịga St Martin, anyị chere na ha ga-ekpori ndụ, ma nwee obi ụtọ banyere inye aka kwado akụ na ụba agwaetiti ahụ.
80% nke obodo iri isii anyị na-anọchi anya ga-emeghe
Relọ oriri na ọụ inụ na Cruz Bay amaliteghachila
Hotellọ nkwari akụ Westin St John na-ezubere ụbọchị ezumike nke ezumike 2019
Hotellọ nkwari akụ Caneel Bay na-eleba anya na ụbọchị imeghe 2019 maka inye ekele
Virgin Gorda na BVI / North Sound mpaghara
Obodo iri abụọ na-emeghe maka mmalite oge na Virgin Gorda, nke dị na mpaghara Mahoe Bay
Villas dị na Leverick Bay ga-achọkwu oge maka nrụzi
Na mgbakwunye, anyị ga-enwe ụlọ ala ndị dị na mmiri:
Obodo 5 na Oil Nut Bay ga-emeghe
Obodo 5 na agwaetiti Scrub ga-emeghe
A ga-emeghe obodo ndị dị na Necker Island
Obere ụlọ nkwari akụ Little Dix Bay na-eleba anya na ụbọchị imeghe 2019